နှာခေါင်းက ပြောတဲ့ ယောင်းယောင်းတို့အကြောင်း - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ… ဗဟုသုတ ရစရာအကြောင်းတွေ ရေးလာတာ အတော်များပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက် အပျော်သဘောနဲ့ နှာခေါင်းတွေက ယောင်းတို့အကြောင်း ဘာတွေ ပြောနေလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်နော်…. အဲ တစ်ခုရှိတာက ဒါက အပျော်သဘောပဲမို့ မှားတာလည်း ရှိသလို တိုက်ဆိုင်ပြီး မှန်တာလည်း ပါပါလိမ့်မယ်… ဒီနှာခေါင်းရှိတဲ့သူတိုင်းဟာ ဒီလိုချည့်ပဲလို့ ယူဆလို့တော့ မရဘူးနော်… ကဲ ဒါဆို ကြည့်ကြရအောင်…
အင်ဂျလီနာဂျိုလီလို နှာခေါင်းသေးသေးလေး ပေါ့ကွယ်.. ဒီလို နှာခေါင်းပိုင်ရှင် ယောင်းလေးတို့ကတော့ ပျော်ရွှင်တက်ကြွတတ်သူတွေပါတဲ့။ တစ်ခါတလေမှာတော့ စိတ်မရှည်တတ်၊ ဒေါသထွက်လွယ်တတ်ပြီး ပေါက်ကွဲလွယ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်လူကိုလည်း ကြည့်ပေးတတ်ပြီး ပျော်အောင် ထားတတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာကိုလည်း သဘောကျတတ်ကြပြီး အလုပ်တစ်ခုကို (၂)ခါ၊ (၃) ခါ လုပ်ရတာမျိုးတောင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ စည်းစနစ်ကျကျ အလုပ်လုပ်ရတာကိုသဘောကျကြပါတယ်.. (ပြောရရင်တော့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် သည်းခံနိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်…)
နှာခေါင်းကြီးတော့ လေဝဝရှူလို့ရတာပေါ့ကွယ် :3 ဒါကတော့ နှာတံတိုတာ၊ ရှည်တာနဲ့ မဆိုင်ဘဲ နှာခေါင်းပေါက်ရှိတဲ့အလုံးလေး (ဘယ်လိုပြောရမယ်မသိလို့ နှာခေါင်းထိပ်ရယ်လည်း မဟုတ်ဘူးကွာ.. အဲ့ နှာရိုးဆုံးသွားပြီး အောက်က အသားနဲ့ အပေါက်နှစ်ပေါက် ပါတဲ့နေရာ :3 ) ကြီးနေတာကို ပြောတာပါ။ ဒီလိုနှာခေါင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းကောင်းသူတွေ၊ မာနကြီးသူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေ ဖြစ်ပြီး အာဏာလာပြတာတွေ ၊ အပေါ်စီးဆန်တာတွေကို သေလောက်အောင် မုန်းတတ်သူပါ။ အဲ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်မသိလိုက်ဘဲ လုပ်မိနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါတော့ သတိထားရမှာပေါ့နော်.. အလုပ်သေးသေး ပိစိကွေးလေးတွေကို တစ်စိမှ စိတ်မဝင်စားဘဲ အကြီးကြီးတွေမှ ကြံတတ်၊ လုပ်တတ်သူတွေပါ။
ဒါကတော့ လီဒါတစ်ယောက်၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မွေးလာသူလို့တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။ အပေါ်က နှာခေါင်းကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ ကွာတာကတော့ နှာခေါင်းရှည်ရှည်ပိုင်ရှင်တွေက ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ဆက်ဆံတတ်သူတွေမို့ လူတွေနဲ့ အဆင်မပြေတာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုကို မကြိုက်တာမျိုး သိပ်မရှိပါဘူး။ ရည်မှန်းချက် ကြီးတဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာ၊ အောင်မြင်မှုကို ထုဆစ်ပုံဖော်တဲ့နေရာတွေမှာ သိပ်တော်တဲ့သူတွေပါ။ တစ်ခါတလေတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အင်အားဟာ ဘာမှန်းမသိဘဲ လမ်းပျောက်သလိုလိုဖြစ်သွားတတ်တာက ဒီနှာခေါင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်ပါပဲ။
ဒီလို နှာခေါင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ သစ္စာရှိပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု အားကောင်းကြပါတယ်။ အဲ.. ရည်မှန်းချက်တော့ ကြီးကြီး မထားတတ်ကြပါဘူး။ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို မနှစ်သက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကို လာပြိုင်နေတယ်ဆိုရင်တောင် ပလစ်ထားတတ်တဲ့သူတွေပါ။ (ဥပေက္ခာ ပြုရတာ ကြိုက်တယ်.. လျစ်လျူရှုရတာ မြတ်နိုးတယ်ပေါ့ 😛 ) ဒါပေမဲ့ သူများ လွှမ်းမိုးတာ ခံရလွယ်ပါတယ်တဲ့။ ဆိုကြပါစို့.. ကိုယ့်ဘေးနားမှာ အလုပ်ကြိုးစားပြီး အလုပ်မှ အလုပ်၊ အလုပ်ကို အရမ်းချစ်တဲ့သူ ရှိနေရင် ကိုယ်လည်း အလုပ်ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတာမျိုးပေါ့.. ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ကြင်နာတတ်ပေမဲ့ သူတို့အတွင်းစိတ်ကို သိဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဒီနှာခေါင်းတွေကိုတော့ ဂရိနှာခေါင်းလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ နှာခေါင်းရိုး ကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ပါ။ ဒီလိုနှာခေါင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ အရမ်းကို ပါးနပ်ပြီး သူများတွေကို ကူညီတတ်ကြပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျ၊ ယုတ္တိရှိရှိ စကားပြောတတ်ကြပြီး ယုံကြည်အားကိုးရသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ယောင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဒီလို နှာတံဖြောင့်ဖြောင့် ပိုင်ရှင်လေး ရှိလို့ကတော့ ယောင်း သူ့ကို လုံးဝ အားကိုးယုံကြည်လုိ့ ရပါပြီ။ ယောင်းမှာ အခက်အခဲ တစ်ခုခု ရှိနေမယ်ဆိုရင်တောင် သူက ယောင်းဘက်မှာ လုံးဝ ရပ်တည်ပေးမှာပါ။
Related Article >>> ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကပြောတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်း
၆။ လှိုင်းတွေနဲ့ နှာခေါင်း
အယ် ရှုပ်ဝါးပြီထင်တယ်။ နှာခေါင်းရိုးက ဖြောင့်ဖြောင့်လေး မနေဘဲ အပေါ်တက် အောက်ဆင်း ဖုလိုက် ပြားလိုက် ဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းထိပ်မှာ ကြီးသွားတဲ့ နှာခေါင်းတွေကို ပြောတာပါ။ သူတို့ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သဘာဝရှိပြီး သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင်က သူတွေကိုလည်း ပျော်ရွှင်စေတတ်သူတွေပါ။
၇။ ခလုတ်နဲ့တူတဲ့ နှာခေါင်း
နှာခေါင်းရိုးက နည်းနည်း ပြားပြားလေးဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းထိပ်မှာမှ ခလုတ်လေးလိုလုံးလုံးလေး ဖြစ်နေတဲ့ နှာခေါင်းလေးပါ။ ချစ်စရာအကောင်းဆုံး နှာခေါင်းပေါ့။ ဒီလို နှာခေါင်းပိုင်ရှင်တွေဟာ ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်ပြီး အကောင်းမြင်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်လို့ ဆိုရမယ့် အချက်ကတော့ စိတ်မငြိမ်တာပါ။ ခံစားချက်တွေက တစ်ထိုင်တည်းမှာတင် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲနေတတ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုတော့ သိပ်ကြည့်မရတတ်ပါဘူးတဲ့ 😛
အင်းလေ.. ဂရိနှာခေါင်းတောင် ရှိသေးတာ ရောမနှာခေါင်းလည်း ရှိရမှာပေါ့နော့်… ရောမက ကျောက်ရုပ်တွေလို လုံးဝ လှပတဲ့ နှာခေါင်းတွေကိုတော့ ရောမ နှာခေါင်းလို့ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနှာခေါင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ ခေါင်းမာတတ်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပုံဖော်တဲ့သူတွေပါ။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာတဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်တဲ့အပြင် ဘူးဆို ဖရုံမသီးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိတဲ့သူတွေပါ။ (ဒဲ့ပြောရရင် ခေါင်းမာတယ်ပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်.. ) သူတို့ရဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့လည်း သူများတွေကို လွှမ်းမိုးတတ်ပါသေးတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာလည်း အလောတကြီးမချတတ်ဘဲ ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေ၊ လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေ အားလုံးကို သေချာ စဉ်းစား၊ အစီအစဉ်ဆွဲပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တတ်သူမျိုးပါ။ သူများတွေကို ဘယ်လို ဆွဲဆောင်ရမလဲ (အလုပ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်) ဆိုတာလည်း သိတဲ့သူတွေပါပဲ။
ဘယ်လိုပြောရမယ်မှန်းမသိလို့ ယောင်းတို့ရေ.. နှာခေါင်း အလယ်နားလောက်မှာ သိမ်ပြီး နှာခေါင်းဖျားထိ ပြန်ကွေးတက်လာတဲ့ နှာခေါင်းလှလှလေးပါ။ လန်လည်း မလန်နေရဘူးနော်.. (ပုံမှာသာကြည့်တော့… ) ဒီလို နှာခေါင်းပိုင်ရှင်လေးတွေကတော့ နွေးထွေးကြသူတွေဖြစ်ပြီး သစ္စာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက် ကျည်ဆန်ကိုတောင် ဝင် ခံရဲတဲ့သူပါတဲ့… (ပြောတာပဲလေ 😛 ) အဲ… အိပ်ရာထဲက ကိစ္စတွေအတွက်လည်း သူတို့က အတော်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့.. ဒါလည်း သူပြောတာ မင်မင်ပြောတာမဟုပု 😛
လီမင်ဟိုလိုလို့ပဲ ပြောရမလား :3 စတာဘာ စတာဘာ… ဒီလို နှာခေါင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ဘယ်သူ့ဘယ်သူရဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှ ဝင်မပါသလို ဘယ်သူ့ ဘယ်သူရဲ့ အပူကိုမှလည်း မျှခံနေမယ့်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ တည်ဆောက်တတ်ပြီး ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုပဲ ကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေပါ။ အဲ… လူအများကြားမှာလည်း ထင်းထွက်နေတတ်သူတွေပေါ့။
၁၁။ Nubian နှာခေါင်း
မြန်မာလိုတော့ ဘယ်လို ခေါ်တယ် မသိဘူးယောင်းတို့ရေ.. မြင်အောင် အနီးဆုံးပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အိုဘားမား နှာခေါင်းကိုသာ ကြည့်ပါ။ ဒီလို နှာခေါင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ ကိစ္စတစ်ခုခုကို ဖြေရှင်းရာမှာ နည်းလမ်းအသစ်တွေနဲ့ ချဉ်းကပ်တတ်ပါတယ်။ သဘောထားကြီး၊ ပွင့်လင်းကြပြီး သိချင်စိတ်များတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတဲ့အပြင် ဆွဲဆောင်မှု အားကောင်းသူတွေလည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ စကားပြောကောင်းတာကလည်း သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်း တစ်ခုပေါ့…
ကဲ.. ယောင်းတို့ရဲ့ နှာခေါင်းကရော ဘယ်လို ပုံစံရှိလဲ? နှာခေါင်းပုံစံလေး ကွဲအောင်ကြည့်ပြီး ကိုယ်က ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ ပြန်တိုက်ကြည့်နော်.. မှန်ရင် မင်မင့်ကို မုန့်ဝယ်ကျွေး 😛 ဘာကြည့်နာလဲ့.. မှန်သွားယူပြီး ကိုယ့်နှာခေါင်းက ဘယ်အမျိုးအစားထဲ ပါလဲ ကြည့်တော့လေ.. :3
References : Cosmopolitan , I- Facts
ယောငျးတို့ရေ… ဗဟုသုတ ရစရာအကွောငျးတှေ ရေးလာတာ အတျောမြားပွီဆိုတော့ ဒီတဈခေါကျ အပြျောသဘောနဲ့ နှာခေါငျးတှကေ ယောငျးတို့အကွောငျး ဘာတှေ ပွောနလေဲဆိုတာ ကွညျ့ကွရအောငျနျော…. အဲ တဈခုရှိတာက ဒါက အပြျောသဘောပဲမို့ မှားတာလညျး ရှိသလို တိုကျဆိုငျပွီး မှနျတာလညျး ပါပါလိမျ့မယျ… ဒီနှာခေါငျးရှိတဲ့သူတိုငျးဟာ ဒီလိုခညျြ့ပဲလို့ ယူဆလို့တော့ မရဘူးနျော… ကဲ ဒါဆို ကွညျ့ကွရအောငျ…
အငျဂလြီနာဂြိုလီလို နှာခေါငျးသေးသေးလေး ပေါ့ကှယျ.. ဒီလို နှာခေါငျးပိုငျရှငျ ယောငျးလေးတို့ကတော့ ပြျောရှငျတကျကွှတတျသူတှပေါတဲ့။ တဈခါတလမှောတော့ စိတျမရှညျတတျ၊ ဒေါသထှကျလှယျတတျပွီး ပေါကျကှဲလှယျတတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈဖကျလူကိုလညျး ကွညျ့ပေးတတျပွီး ပြျောအောငျ ထားတတျကွပါတယျ။ အလုပျလုပျရတာကိုလညျး သဘောကတြတျကွပွီး အလုပျတဈခုကို (၂)ခါ၊ (၃) ခါ လုပျရတာမြိုးတောငျ စိတျရှညျရှညျနဲ့ လုပျနိုငျပါတယျတဲ့။ စညျးစနဈကကြ အလုပျလုပျရတာကိုသဘောကကြွပါတယျ.. (ပွောရရငျတော့ အလုပျနဲ့ ပတျသကျရငျ သညျးခံနိုငျတယျလို့ဆိုရမှာပေါ့နျော…)
နှာခေါငျးကွီးတော့ လဝေဝရှူလို့ရတာပေါ့ကှယျ :3 ဒါကတော့ နှာတံတိုတာ၊ ရှညျတာနဲ့ မဆိုငျဘဲ နှာခေါငျးပေါကျရှိတဲ့အလုံးလေး (ဘယျလိုပွောရမယျမသိလို့ နှာခေါငျးထိပျရယျလညျး မဟုတျဘူးကှာ.. အဲ့ နှာရိုးဆုံးသှားပွီး အောကျက အသားနဲ့ အပေါကျနှဈပေါကျ ပါတဲ့နရော :3 ) ကွီးနတောကို ပွောတာပါ။ ဒီလိုနှာခေါငျးပိုငျရှငျတှကေတော့ ဦးဆောငျနိုငျစှမျးကောငျးသူတှေ၊ မာနကွီးသူတှဖွေဈတတျပါတယျ။ အလုပျလုပျတဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျပိုငျ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့သာ လှတျလှတျလပျလပျ အလုပျလုပျခငျြသူတှေ ဖွဈပွီး အာဏာလာပွတာတှေ ၊ အပျေါစီးဆနျတာတှကေို သလေောကျအောငျ မုနျးတတျသူပါ။ အဲ ကိုယျကတော့ ကိုယျမသိလိုကျဘဲ လုပျမိနတောမြိုးလညျး ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒါတော့ သတိထားရမှာပေါ့နျော.. အလုပျသေးသေး ပိစိကှေးလေးတှကေို တဈစိမှ စိတျမဝငျစားဘဲ အကွီးကွီးတှမှေ ကွံတတျ၊ လုပျတတျသူတှပေါ။
ဒါကတော့ လီဒါတဈယောကျ၊ ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈဖို့ မှေးလာသူလို့တောငျ ပွောလို့ ရပါတယျ။ အပျေါက နှာခေါငျးကွီးတဲ့သူတှနေဲ့ ကှာတာကတော့ နှာခေါငျးရှညျရှညျပိုငျရှငျတှကေ ပြော့ပြော့ပြောငျးပြောငျး ဆကျဆံတတျသူတှမေို့ လူတှနေဲ့ အဆငျမပွတော၊ ကိုယျ့ရဲ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုကို မကွိုကျတာမြိုး သိပျမရှိပါဘူး။ ရညျမှနျးခကျြ ကွီးတဲ့သူတှေ ဖွဈတဲ့အပွငျ အိပျမကျကို အကောငျအထညျဖျောတဲ့နရော၊ အောငျမွငျမှုကို ထုဆဈပုံဖျောတဲ့နရောတှမှော သိပျတျောတဲ့သူတှပေါ။ တဈခါတလတေော့ ကိုယျ့ရဲ့ အားသာခကျြ၊ ကိုယျ့ရဲ့ အငျအားဟာ ဘာမှနျးမသိဘဲ လမျးပြောကျသလိုလိုဖွဈသှားတတျတာက ဒီနှာခေါငျးပိုငျရှငျတှရေဲ့ အကွီးမားဆုံး အားနညျးခကျြပါပဲ။
ဒီလို နှာခေါငျးပိုငျရှငျတှကေတော့ သစ်စာရှိပွီး အာရုံစူးစိုကျမှု အားကောငျးကွပါတယျ။ အဲ.. ရညျမှနျးခကျြတော့ ကွီးကွီး မထားတတျကွပါဘူး။ ယှဉျပွိုငျခွငျးကို မနှဈသကျတဲ့သူတှဖွေဈပွီး ကိုယျ့ကို လာပွိုငျနတေယျဆိုရငျတောငျ ပလဈထားတတျတဲ့သူတှပေါ။ (ဥပက်ေခာ ပွုရတာ ကွိုကျတယျ.. လဈြလြူရှုရတာ မွတျနိုးတယျပေါ့ 😛 ) ဒါပမေဲ့ သူမြား လှမျးမိုးတာ ခံရလှယျပါတယျတဲ့။ ဆိုကွပါစို့.. ကိုယျ့ဘေးနားမှာ အလုပျကွိုးစားပွီး အလုပျမှ အလုပျ၊ အလုပျကို အရမျးခဈြတဲ့သူ ရှိနရေငျ ကိုယျလညျး အလုပျကွိုးစားခငျြစိတျတှေ ပျေါလာတာမြိုးပေါ့.. ခဈြဖို့ကောငျးပွီး ကွငျနာတတျပမေဲ့ သူတို့အတှငျးစိတျကို သိဖို့ ခဲယဉျးပါတယျ။
ဒီနှာခေါငျးတှကေိုတော့ ဂရိနှာခေါငျးလို့ ချေါကွပါတယျ။ နှာခေါငျးရိုး ကဉျြးကဉျြးလေးနဲ့ပါ။ ဒီလိုနှာခေါငျးပိုငျရှငျတှကေတော့ အရမျးကို ပါးနပျပွီး သူမြားတှကေို ကူညီတတျကွပါတယျ။ လကျတှကေ့ကြ၊ ယုတ်တိရှိရှိ စကားပွောတတျကွပွီး ယုံကွညျအားကိုးရသူတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ ယောငျးရဲ့ သူငယျခငျြးတှထေဲမှာ ဒီလို နှာတံဖွောငျ့ဖွောငျ့ ပိုငျရှငျလေး ရှိလို့ကတော့ ယောငျး သူ့ကို လုံးဝ အားကိုးယုံကွညျလုိ့ ရပါပွီ။ ယောငျးမှာ အခကျအခဲ တဈခုခု ရှိနမေယျဆိုရငျတောငျ သူက ယောငျးဘကျမှာ လုံးဝ ရပျတညျပေးမှာပါ။
Related Article >>> ကိုယျ့နှုတျခမျးကပွောတဲ့ ကိုယျ့အကွောငျး
၆။ လှိုငျးတှနေဲ့ နှာခေါငျး
အယျ ရှုပျဝါးပွီထငျတယျ။ နှာခေါငျးရိုးက ဖွောငျ့ဖွောငျ့လေး မနဘေဲ အပျေါတကျ အောကျဆငျး ဖုလိုကျ ပွားလိုကျ ဖွဈပွီး နှာခေါငျးထိပျမှာ ကွီးသှားတဲ့ နှာခေါငျးတှကေို ပွောတာပါ။ သူတို့ဟာ ပြျောပြျောနတေတျတဲ့ သဘာဝရှိပွီး သူတို့ ပတျဝနျးကငျြက သူတှကေိုလညျး ပြျောရှငျစတေတျသူတှပေါ။
၇။ ခလုတျနဲ့တူတဲ့ နှာခေါငျး
နှာခေါငျးရိုးက နညျးနညျး ပွားပွားလေးဖွဈပွီး နှာခေါငျးထိပျမှာမှ ခလုတျလေးလိုလုံးလုံးလေး ဖွဈနတေဲ့ နှာခေါငျးလေးပါ။ ခဈြစရာအကောငျးဆုံး နှာခေါငျးပေါ့။ ဒီလို နှာခေါငျးပိုငျရှငျတှဟော ခဈြခငျကွငျနာတတျပွီး အကောငျးမွငျတတျသူတှဖွေဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရဲ့ အားနညျးခကျြလို့ ဆိုရမယျ့ အခကျြကတော့ စိတျမငွိမျတာပါ။ ခံစားခကျြတှကေ တဈထိုငျတညျးမှာတငျ အမြိုးမြိုး ပွောငျးလဲနတေတျပွီး စိတျဓာတျခိုငျမာတဲ့သူတှကေိုတော့ သိပျကွညျ့မရတတျပါဘူးတဲ့ 😛
အငျးလေ.. ဂရိနှာခေါငျးတောငျ ရှိသေးတာ ရောမနှာခေါငျးလညျး ရှိရမှာပေါ့နေျာ့… ရောမက ကြောကျရုပျတှလေို လုံးဝ လှပတဲ့ နှာခေါငျးတှကေိုတော့ ရောမ နှာခေါငျးလို့ပဲ ချေါကွပါတယျ။ ဒီလိုနှာခေါငျးပိုငျရှငျတှကေတော့ ခေါငျးမာတတျပွီး ရညျမှနျးခကျြကို မဖွဈဖွဈအောငျ ပုံဖျောတဲ့သူတှပေါ။ စိတျဓာတျခိုငျမာပွီး ဆုံးဖွတျခကျြ ခိုငျမာတဲ့သူတှလေညျး ဖွဈတဲ့အပွငျ ဘူးဆို ဖရုံမသီးဘူးဆိုတဲ့ စိတျထားမြိုး ရှိတဲ့သူတှပေါ။ (ဒဲ့ပွောရရငျ ခေါငျးမာတယျပေါ့ ယောငျးတို့ရယျ.. ) သူတို့ရဲ့ စကားလုံးတှနေဲ့လညျး သူမြားတှကေို လှမျးမိုးတတျပါသေးတယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြခရြာမှာလညျး အလောတကွီးမခတြတျဘဲ ဖွဈလာမယျ့ အကြိုးဆကျတှေ၊ လကျရှိဖွဈနတောတှေ အားလုံးကို သခြော စဉျးစား၊ အစီအစဉျဆှဲပွီးမှ ဆုံးဖွတျတတျသူမြိုးပါ။ သူမြားတှကေို ဘယျလို ဆှဲဆောငျရမလဲ (အလုပျကိစ်စဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျရေးကိုယျတာပဲဖွဈဖွဈ) ဆိုတာလညျး သိတဲ့သူတှပေါပဲ။
ဘယျလိုပွောရမယျမှနျးမသိလို့ ယောငျးတို့ရေ.. နှာခေါငျး အလယျနားလောကျမှာ သိမျပွီး နှာခေါငျးဖြားထိ ပွနျကှေးတကျလာတဲ့ နှာခေါငျးလှလှလေးပါ။ လနျလညျး မလနျနရေဘူးနျော.. (ပုံမှာသာကွညျ့တော့… ) ဒီလို နှာခေါငျးပိုငျရှငျလေးတှကေတော့ နှေးထှေးကွသူတှဖွေဈပွီး သစ်စာရှိတဲ့ သူငယျခငျြးကောငျးတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ သူတို့နဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူတှအေတှကျ ကညျြဆနျကိုတောငျ ဝငျ ခံရဲတဲ့သူပါတဲ့… (ပွောတာပဲလေ 😛 ) အဲ… အိပျရာထဲက ကိစ်စတှအေတှကျလညျး သူတို့က အတျောဆုံး၊ အကောငျးဆုံးပါပဲတဲ့.. ဒါလညျး သူပွောတာ မငျမငျပွောတာမဟုပု 😛
လီမငျဟိုလိုလို့ပဲ ပွောရမလား :3 စတာဘာ စတာဘာ… ဒီလို နှာခေါငျးပိုငျရှငျတှကေတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိတဲ့သူတှဖွေဈပွီး ဘယျသူ့ဘယျသူရဲ့ ကိစ်စတှထေဲမှ ဝငျမပါသလို ဘယျသူ့ ဘယျသူရဲ့ အပူကိုမှလညျး မြှခံနမေယျ့သူတှေ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျကမ်ဘာကို သူတို့ကိုယျတိုငျပဲ တညျဆောကျတတျပွီး ကိုယျယုံကွညျရာကိုပဲ ကိုယျလုပျမယျဆိုတဲ့သူမြိုးတှပေါ။ အဲ… လူအမြားကွားမှာလညျး ထငျးထှကျနတေတျသူတှပေေါ့။
၁၁။ Nubian နှာခေါငျး
မွနျမာလိုတော့ ဘယျလို ချေါတယျ မသိဘူးယောငျးတို့ရေ.. မွငျအောငျ အနီးဆုံးပွရမယျဆိုရငျဖွငျ့ အိုဘားမား နှာခေါငျးကိုသာ ကွညျ့ပါ။ ဒီလို နှာခေါငျးပိုငျရှငျတှကေတော့ ကိစ်စတဈခုခုကို ဖွရှေငျးရာမှာ နညျးလမျးအသဈတှနေဲ့ ခဉျြးကပျတတျပါတယျ။ သဘောထားကွီး၊ ပှငျ့လငျးကွပွီး သိခငျြစိတျမြားတဲ့သူတှေ ဖွဈနတေဲ့အပွငျ ဆှဲဆောငျမှု အားကောငျးသူတှလေညျး ဖွဈနပေါသေးတယျ။ စကားပွောကောငျးတာကလညျး သူတို့ရဲ့ အရညျအခငျြး တဈခုပေါ့…
ကဲ.. ယောငျးတို့ရဲ့ နှာခေါငျးကရော ဘယျလို ပုံစံရှိလဲ? နှာခေါငျးပုံစံလေး ကှဲအောငျကွညျ့ပွီး ကိုယျက ဘယျလိုလူလဲဆိုတာ ပွနျတိုကျကွညျ့နျော.. မှနျရငျ မငျမငျ့ကို မုနျ့ဝယျကြှေး 😛 ဘာကွညျ့နာလဲ့.. မှနျသှားယူပွီး ကိုယျ့နှာခေါငျးက ဘယျအမြိုးအစားထဲ ပါလဲ ကွညျ့တော့လေ.. :3
Tags: face, Fun, nose, personality, reading, tells, type of noses
ယောင်းရဲ့ မျက်နှာဖုံးအောက်က ဘဝတစ်မျိုးက ဘာဖြစ်မလဲ?
Wathun June 4, 2018